Uninzi lwabafazi basekhaya bathanda izinto zokusebenza ezisetyenziswayo. Kuzo zixhobo ziyakwazi ukuthwala i-aerogrill. Ukusetyenziswa kwekhitshi kufaka iindidi zesekhishini - i-grill, i-hob, i-microwave, i-shish kebab, i-toaster, i-fryer ejulile kunye ne-steamer.
I-Aerogrill yavela kuqala kwiimarike zase-United States kwiminyaka engama-80. Isixhobo safunyanwa ngenxa yokuba ukutya kuphekwe kuyo ngoncedo lweemifudlana ezishushu emoyeni. Ukongeza, ivelisa izitya ezifanelekileyo - i-grill. Abambalwa bezindlu bahlala bekhawuleza ukuthenga into enjalo kwindlu ekhitshini, kwaye kuba bebantsha kuye.
I-Naaerogrile ingapheki nje kuphela ukutya okumnandi, kodwa kukutya okuncedo. Ngenxa yokuyilwa kwayo efanelekileyo, unokupheka izitya ezininzi ngexesha elinye. I-Potokinagretogo emoyeni iyatshiswa kwimveliso yamanqatha amaninzi, ngenxa yokutya okuba yi-caloric encinci. Nangona kunjalo, igcina zonke iivithamini ezinobuncedo kunye nezinto. Izitya zilungiselelwe ngomoya oshisayo, kungekhona i-microwave imisebe.
Ngaphambi kokuthenga i-aerogrill, kufuneka uqonde ukuba yeyiphi idivaysi kwaye isebenza njani. Ngaphandle i-container ebonakalayo ebonakalayo eyenziwe yilazi-gesi ekhuselekayo, ekhutshwe ngenkxaso ekhethekileyo esuka kwiplastiki. Eli lime likhusela itafile ekudibanisaneni neso sisebenzayo. Ngoko ke, ngexesha lokuthenga, qi niseka ukuba unake ingqalelo kwigunya leglasi, kunye namandla okukhusela. Iimpawu zokukhusela akufanele zilungele ezandleni zakho kwaye zonke iindawo kufuneka zihlanganiswe ngokuqinile. Ngaphezulu, i-aerogrill ihlanganiswe isiqhekeza, ubunzima balo malunga ne 2.5 kg. Isibambo sinobunzima obunjalo ngenxa yokuba kukho ipaneli yokulawula ngaphandle, kwaye ukusuka ngaphakathi ukuya kwisibhambathiso umqhubi kunye nento yokufudumala ifakwe. Isibhambathiso ngaphambi kokuthenga kufuneka kwakhona sihlolwe: zonke iindawo kufuneka zixinwe ngokuqinile. Ngaphambi kokuthenga, ukuba kunokwenzeka, cela umthengisi ukuba ahlole umbane wenkonzo.
Into yokufudumala kwi-aerogrills ingaba i-halogen okanye i-TEN. I-helogen heater iyakudla ukutya ngokukhawuleza, oko kuthetha ukuba bhetele. Amafayili ayahlukana nenani lezantya. Ngama-aerogrills alula, abalandeli banesantya esisodwa, kwiimodeli eziphambili ezi zihambelane zikhona ezintathu. Ukukhawuleza ngakumbi, ukuphakamisa ubuchule befowuni, kwaye ngoko ke, unako ukulungiselela izitya.
Ngaphakathi kwe-aerogryla kukho ii-lattic kunye neetereyi, apho izitya ezininzi zingaphekwa ngexesha elifanayo. Njengomthetho, igridi ifaka umkhuseli wocingo, isandi sokuphakamisa, ukukrola kathathu, ukufaka i-tongs kunye ne-four skewers. Ngokuxhomekeka kwinqanaba lomenzi kunye nexabiso, ubuninzi bezinto eziyahlukahluka. Kwakhona, ii-aerogrills zinemiqulu eyahlukileyo.
Izinzuzo ze-aerogrill :
kuyo unokupheka iintlobo ezahlukeneyo zokutya;
izitya ziphekwe ngaphandle kweoli;
Ubukho bamanqanaba amaninzi kukuvumela ukupheka izitya eziliqela kanye.
Iingxaki ze-aerogrill :
Icala leglasi litshisa kakhulu ngexesha lokusebenza kwe-aerogrill, ngoko kulula kakhulu ukuyitshisa;
amandla esi sixhobo sikhulu, kodwa ixesha lokupheka lide. Ngoko ke, awuyi kukwazi ukusindisa kumbane.
Yintoni enokuyenza i-aerogrill?
Abo bagqiba ukuthenga le fowuni ngokwabo, babuzwa umbuzo othi: "Yintoni enokuyilungisa kulo mzekelo?". Abavelisi baqinisekisa ukuba kwi-aerogrylimozhno bapheka phantse zonke izitya - ukusuka kwisobho ukuya kwi-dessert. Iimveliso zenyama zingomiswa, zibheke, kwaye nazo ziyakwazi ukupheka inyama okanye i-shish kebabs. Ngokuqinisekileyo, ungathembeli ukuba kwi-aerogril uza kufumana i-shish kebabs efana neyokugaya, kodwa oku kuya kuba yintsike e-fried shish kebabs. I-hiccups kuphela iya kuba ayiyi kuvutha njengomsi.
I-Smokehouse iya kwahlukana nanamhlanje, nangona kunjalo, kwi-aerogril unokongeza umkhiqizo wokutshaya okanye u-shavings oya kunika umsi obalulekileyo. Nangona kunjalo, loo mi sebenzi yodwa yimizekelo ethe xaxa. Ngoko kulungele ukugqiba ngokukhawuleza, kodwa ufuna ukuhlawula ngaphezulu into ongayifuniyo? Ukongeza, kule fowuni unokubilisa iifatata, iintlanzi zentlanzi, yenza isobho okanye ipharaki, upheke i-pizza. Ukongezelela, nangona kungekho mzamo omkhulu, ungabhaka iipeyi, i-meringue jam kunye nokunye okunjalo. Kuya kunceda ekulondolozeni - kwi-aerogrills unokuncenkceshela amathini.
Ifowuni inokutshintsha i-oven microwaves - inokufudumala iphinde ihlasele ikhamera. Nangona kunjalo, kwi-microwave oku kwenziwa ngokukhawuleza. Emva koko, phawula ukuba akuwona onke amanqaku asemhlabeni wonke. Akunjalo yonke i-aerogrill ingakwazi ukulungiselela uninzi lwezidlo - inani lemisebenzi lincike kwixabiso.
Ukukhethwa kwe-aerogrill kufuneka kuthathe ingqalelo inombolo yenqanaba lomqhubi. Ubuchule becebo buxhomekeke ngqo kule. Ngezixhobo ezihamba ngesantya esisodwa, unokulungisa izitya ezilula: i-porridge, isobho, iifatata, inkukhu kunye nezinto ezinjalo. Izixhobo zesantya ezi-3 unokulungisa amanzi, i-yoghurts, iigleke, iwayini e-mulled njalo njalo. Kwakhona kweso sixhobo unokutshaya, utywala njalo njalo. Kwimimodeli emitsha, ungakhetha iindlela ezahlukeneyo zokushisa - ukuya kuma-modes ayisithoba. Kwakhona kunokwenzeka ukuba ulungelelanise isivinini sokuhambisa umbane kunye nomqondiso wempumelelo. Amathuba okuba aerogrills aphezulu kakhulu. Kodwa nangona kunjalo, abaninzi abendlukazi baqinisekisa ukuba i-patties ibhetele kwaye i-tastier ehovini kunokuba i-aerogrill. Ngoko ke, i-aerogrill ayikwazi ukukhuphisana ne-oven. Kodwa ingasetyenziswe ngesibindi esikhundleni se-microwave, isitashi, isitya, kunye nokunye okunjalo.
Ukuqhubeka ukusuka ngasentla, sinokwenza izigqibo ezilandelayo:
Ngaphambi kokuthenga i-aerogrill, kufuneka unqume ukuba yeyiphi impawu oyifunayo-oku kuya kuqonda ngokuthe ngqo intengo yayo;
ngexesha lokuthenga, kuyimfuneko ukuba ukhangele ukunikezelwa kwesixhobo, umgangatho wazo zonke iinxalenye zayo, kunye namandla onke onke amalungiselelo;
ngokukhawuleza umqhubi unayo, izitya ezininzi unokuzilungiselela i-vaerogril;
xa kuthengwa kungcono ukukhetha i-aerogril kunye ne-helogen heater, njengoko iya kufudumala ukutya ngokukhawuleza, oku kuthetha ukuba uza kusindisa ixesha namandla.
Njengoko ubona, i-aerogrill ingaba ngumncedisi oyimfuneko ekhitshini.
Inkqubo yoMgangatho we-grinder inyama
OyiNtloko kwi-skeet. Iingoma kunye neenyaniso malunga nama-dishwashers
Indlela yokukhetha i-multivariate ekwenzeni isidlo esihlwabusayo nesempilweni
Nguwuphi umenzi wekhofi ongawukhetha ekhaya?
Indlela yokukhetha i-heater fan
Inkululeko kunye namathuba angenamkhawulo: ii-headphone zemidlalo ze-Philips
I-cervicitis enobuchule kwaye engapheliyo: iimpawu, ukuxilongwa, unyango
Indlela yokusabela ngayo xa uhlekwa usulu kunye namagama omnxeba
Ukudumisa umntu, ungamcaphukisa
Ziziphi iimpawu ze-zodiac zilinde inhlanhla ngoJanuwari 2018
I-step-by-step recipe kwikota ye-multivarka
Indlela yokubala ukukhulelwa
Yintoni eyenziwa kwiSonto lePal Palm kunye namasiko amasha kunye namadala amaninzi emveli
Iindaba zakutshanje ku-Lisa Peskova's Instagram: umfanekiso wesiphumo esibulalayo, isithombe
Umfazi akanakuvuyela kakhulu ngesondo
Boston ubhaka ubhontshisi
USergey Bezrukov wabuza umsebenzisi wezonxibelelwano zentlalo malunga nenkonzo